ဝင်းနဲ့ဇော်လွတ်မြောက်ရေး အာဆီယံအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပါ လက်မှတ်ထိုး ထောက်ခံကြ
11 ก.ย. 2562 - 13:33 น.
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ အာဆီယံ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ညီလာခံ၊ အာဆီယံ လူထုဖိုရမ် (ACSC/AFP)2019 မှာ လိပ်ကျွန်းအမှုက သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ဝင်းနဲ့ဇော် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကမ်ပိန်းတစ်ခုကို ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ကန်ပိန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု Equality Myanmar က ဦးအောင်မျိုးမင်းတို့က ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီအစည်းအဝေးကို အာဆီယံ ၁၁ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းက လူ ၇၀၀ ကျော်တက်ရောက်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
'' ဒီနေ့ အစီအစဉ်ကနေ ၁၅မိနစ် အချိန်တောင်းပြီး ဝင်းနဲ့ဇော် လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုတာကို လုပ်ခဲ့တာ၊ ထိုင်းဘုရင့်ထံကို ပေးပို့သွားမယ့် မေတ္တာရပ်ခံစာနဲ့အတူ ပေးပို့သွားမယ့် သူတို့လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ပါဝင်တောင်းခံတဲ့ လက်မှတ်တွေကိုလည်း ကောက် နေတာ၊ အခု နေ့လယ် ၁၂ နာရီကျော်ထိကို ထောက်ခံတဲ့လက်မှတ် ၄၀၀ ကျော်ရထားပြီးပြီ၊ လက်မှတ်တွေကိုတော့ ပွဲပြီးမယ့် မနက်ဖြန် ညနေ အထိ ကောက်သွားမယ်''လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ACSC/AFP အာဆီယံအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ညီလာခံကို စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်ကနေစပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ရှိ Thammasat University မှာ ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေး အပါအဝင် တရားမျှ တရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တန်းတူညီမျှရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးကိစ္စများ ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေး နေကြ တာဖြစ် ပါတယ်။
' ' ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးကလည်း အရေးကြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဝင်းနဲ့ဇော် ကိစ္စကို အဓိက ၂ ချက်နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်၊ သေဒဏ် ကျခံရတာ အသနားခံစာတင်တာ ပယ်ချခံထားရတဲ့အခြေအနေရယ်၊ DNA စစ်တဲ့အခါမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက် တရားမျှတမှု မရှိတဲ့အပေါ်အခြေခံပြီး သေဒဏ်ချမှတ်ခံရတာကို ပြောခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရော ထိုင်းလိုရောဘာသာ ပြန်ပြောခဲ့တယ်၊ တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြတယ်၊ ထောက်ခံတဲ့ လက်မှတ်တွေထဲမှာ ထိုင်းကလူ တွေ လည်း ပါတယ်''လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။
ဝင်းနဲ့ဇော် နောက်ဆုံးအယူခံကို သြဂုတ်၂၉ ရက်က ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နွန်ထဘူရီ ခရိုင်တရားရုံးကနေ ပယ်ချခံခဲ့ရ
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ကိုဇော်လင်း တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးအယူခံကို သြဂုတ်၂၉ ရက်က ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နွန်ထဘူရီ ခရိုင်တရားရုံးကနေ ပယ်ချခံခဲ့ရပါ တယ်။
ဝင်းနဲ့ဇော် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ထိုင်းဘုရင့်ထံ အသနားခံစာ တင်ဖို့သာ ရှိတော့တဲ့အတွက် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ထိုင်းဘုရင်ထံ မေတ္တာရပ်ခံစာပေးပို့ဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
' ' ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုတဲ့အခါ ကျန်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေက တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးလက်မှတ်ထိုး ကြတာ တွေ့ရတယ်၊ လိုလိုလားလားပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကို စင်ပေါ်မှာ သီးသန့်အချိန်ပေးပြီးတော့ကို တောင်းဆိုခွင့်ကို ခွင့်ပြုခဲ့ကြတယ်၊ အာဆီယံအရပ်ဘက် အဖွဲ့ရဲ့ ဖိုရမ် ကို ဦးဆောင်တဲ့စီစဉ်သူတွေကလည်း ဒီကိစ္စကို တစ်သားတည်းရပ်တည်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်''လို့ ဝင်းနဲ့ဇော်အရေး တောင်းဆိုရာမှာ အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေက ကိုယ်စားပြုအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သဘောထားကိုလည်း အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို တက်ရောက်နေတဲ့ မသဉ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ရဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းဘုရင်ထံ အသနားခံစာ အမြန်ဆုံးတင်နိုင် ဖို့အတွက် မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်း လုပ်ဆောင်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်နဲ့အဖွဲ့ဟာ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ဝင်းနဲ့ဇော်ထံ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဝင်းနဲ့ဇော်လွတ်မြောက်ရေး အာဆီယံအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပါ လက်မှတ်ထိုး ထောက်ခံကြ